Otto Lior Ron Co-Onye guzobere ya na-ahapụ Uber | Akụkọ akụrụngwa
Nsogbu na-aga n'ihu na-achịkọta Uber ka ihe ọghọm ahụ gburu otu nwanyị gasịrị na United States. Fewbọchị ole na ole ka ihe mberede ahụ gasịrị, ekpughere na ụlọ ọrụ ahụ enweelarị nsogbu na ụgbọ ala ya kwụ ọtọ. Ihe nke akukoghi na mbu. Yabụ ụlọ ọrụ ahụ nọ ọzọ na nsogbu. Ọgbaghara nke emere ugbu a na arụkwaghịm nke Lior Ron.
Lior Ron bụ ngalaba-onye guzobere Otto, ụlọ ọrụ kwụ ọtọ nke Uber nwetara na 2016. I meela mkpebi ịhapụ ụlọ ọrụ n'ọnọdụ nsogbu a. Ihe ohuru ohuru diri ulo oru America.
Onwebeghị ihe ekpughere ruo ugbu a gbasara ihe kpatara ọpụpụ ya. Ma otu onye isi ma ọ bụ Uber achọghị ikwu ihe ọ bụla gbasara ya. Companylọ ọrụ ahụ ekwuola na ha na-anụ ọkụ n'obi maka ọrụ ha na mpaghara a yana na ha nwere olile anya ịgbanwe ahịa njem.
Ya mere a na-atụ anya na n’oge na-adịghị anya, a ga-amatakwu ihe ọzọ gbasara ihe kpatara ngagharị a. Ebe ọ bụ na mgbakwunye na ịbụ ihe dị mkpa maka ụlọ ọrụ ahụ, abịa n’oge tara akpụ nke ukwuu maka ya. N'ihi na a na-enyocha Uber ọzọ maka nsogbu ya na ụgbọ ala ndị kwụ ọtọ.
Ọzọkwa, ozi ndi ozo aputawo banyere nsogbu nke ugbo ala ndi mmadu kwadoro. Ebe ọ bụ na ekwuru na Uber belatara ọnụ ọgụgụ nke ihe mmetụta nchekwa na ụgbọ ala. Ihe mere ka ha kpuo ìsì. Yabụ, enweghị ike ịchọpụta ụfọdụ ihe dị n'okporo ụzọ. Obi abụọ adịghị ya, ihe dị egwu ma nwee ike ibute ihe mberede ahụ.
Anyị nwere ike ịhụ na ụlọ ọrụ ahụ dị n'etiti esemokwu ahụ, otu ugboro ọzọ. N'oge a, a na-enyocha ihe mberede ahụ ma ụlọ ọrụ ahụ na-enyochakwa nyocha. Yabụ na anyị nwere olile anya ịnụ banyere ya nso nso. N'ihi na Uber emeela ka o doo anya na enwere ihe adịghị mma na ụgbọ ala ya ndị kwụ ọtọ.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akụkọ akụrụngwa » General » Lior Ron, onye nchoputa Otto, hapuru Uber